Ukuthenga indlela yokuziphatha kuzitshintshile, iiNkampani azikhange | Martech Zone
Ngamanye amaxesha senza izinto kuba yindlela esele yenziwe ngayo. Akukho mntu ukhumbulayo ukuba kutheni kanye kanye, kodwa siqhubeka sikwenza… nokuba kuyasenzakalisa. Xa ndijonga ukuthengisa okuqhelekileyo kunye nolawulo oluphezulu lweenkampani zale mihla, ulwakhiwo alutshintshanga okoko besinabantu abathengisayo ukutyhala ipavumente kwaye ukucofa iidola.
Kwiinkampani ezininzi endikhe ndazindwendwela, uninzi "lweentengiso" lwenzeka kwicala lokuthengisa eludongeni. Ukuthengisa kuthatha nje iodolo. Ngelishwa, ngenxa yemithetho yombutho, amaSebe okuThengisa aqhubeka nokubongwa ngale mizamo. Yindawo engwevu eyenza ukulinganisa ukuthengisa kwimpembelelo yentlalo kube nzima.
Ndibhalile malunga nendlela intengiso enokusebenzisa ngayo amajelo eendaba ezentlalo kunye notshintsho kwindlela yokuziphatha komthengi kwizithuba ezimbalwa:
Ukuthengisa ngaphakathi kunye neFelnel eNtsha yokuThengisa
Ukutshintsha kweParadigm yokuThengisa
Amanyathelo amahlanu eNethiwekhi yokuNxibelelana kwabaSebenzi beNtengiso
Ezinye iinkampani endizaziyo ziye zahambisa ukuthengisa ngokupheleleyo ngaphakathi kweNtengiso kwaye ezinye ziyiphelisile imibutho yokuthengisa iyonke. Andikukhuthazi nokuba kunjalo, kodwa kuyathakazelisa ukuba kuninzi ukudideka okwenzekayo xa kuziwa kwindawo oza kutyala kuyo imali yakho yokuthengisa kunye nentengiso. Akukho nkqubo ixhasa umlinganiso wentengiso yoluntu… apho imveliso yakho yayithengiswa ngaphandle koncedo lokuthengisa okanye lokuthengisa kodwa noluntu lwakho.
Inkqubo yesiko ngaphakathi kombutho ikhupha ikhredithi njengethemba elinokuqhubeka ngenkqubo yentengiso.
Inyani, ewe, inyani kukuba intengiso inokuza kwiNtengiso, ukuThengisa okanye nakuLuntu lwakho. Zingaphi izihlandlo uthenge imveliso okanye inkonzo esekwe kwisindululo esivela kuluntu lwakho?
Kuyamangalisa kum ukuba ezinye iinkampani azithathi nzuzo eluntwini zisebenzisa iinkonzo zokuthengisa ezinxulumene nazo. Ndineeakhawunti zokuthengisa ezifanelekileyo kwimveliso nganye kunye nezivumelwano zokudlulisa kunye nabo bonke abathengisi bam. Ndifumana intengiso kule mibutho ke kulungile ukuba bobabini ndifumane ikhredithi kunye nomvuzo!
Ngokufanelekileyo, 'ukusondela' ngekhe kwenzeke kuThengiso, ukuThengisa okanye noLuntu. Ukuvalwa kuya kwenzeka kwinkqubo yokuvelisa iakhawunti, ukuqinisekisa ukuba intengiso ifakwe ngokufanelekileyo kumthombo ofanelekileyo. Oku kuyakuvumela iinkampani ukuba zichonge apho kufanelekileyo ukuba batyale imali.
Ukuthengisa, ukuThengisa, kunye neMveliso kufuneka zikhuphisane ngokuchasene nezixhobo kunye neziphumo. Kuya kufuneka basebenze ngokusondelelene kakhulu omnye nomnye ukuqinisekisa ukuba ukuthumela imiyalezo kunye nokubeka uphawu kuhambelana. Iindleko ngokuVala ngakunye kufuneka zilinganiswe kuzo zontathu izixhobo. Olunye ugqithiso lwekhredithi lunokwenzeka, ewe ... ukuthunyelwa kunokuya kwiwebhusayithi kwaye uqhakamshele ukuthengisa ngolwazi olongezelelekileyo. Kwimeko apho, iqela lokuthengisa likhulisa kwaye lizisa ukuthengisa ukuvala.
Ungafumanisa ukuba unemveliso ebalaseleyo okanye inkonzo ekhula ngomlomo wedwa… kule meko ungangcono xa utyale imveliso kunentengiso kunye nentengiso. Ewe kunjalo, ukuba akukho kuvalwa kwenzekayo ekuhlaleni, iqela lolawulo lwemveliso kufuneka libenoxanduva- kukho ithuba elihle lokuba imveliso yakho isilele.
Indlela yakudala yokukhutshwa ngesandla ayisasebenzi ngoku. Amasebe amaninzi okuthengisa anamaxabiso asondeleyo, kodwa okoko intengiso ifumana ikhredithi- zikwafumana nezixhobo. Ndibonile amasebe amaninzi entengiso esusa imimangaliso ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali ... egalela ukuvala umbutho apho iqela lokuthengisa lithatha nje iodolo- kodwa lifumana ikhredithi, izixhobo kunye neebhonasi. Ukuba isikhokelo sewebhu sinokutsiba ngokuthe ngqo ukusuka kwindawo ukuya esiphelweni kwiqela leakhawunti, isebe lezentengiso linokufumana ikhredithi elungileyo.
Ukuba iinkampani zifuna ukuqonda indlela elibaluleke ngayo iqhinga ngalinye kwisicwangciso-qhinga seshishini, kufuneka zikwazi ukulinganisa ngokuchanekileyo ukuba zivela phi na iintengiso!
tags: ukusebenza komxholoiifomuIsiFrentshiIsiJamaniishishini roiMari Smithukuphononongathengisa i intanethiIntengiso yoBudlelwane eNtsha